Tempolin'ny Gua Aluvihara (Aluviharaya). Matale ~ Journey-Assist - Famintinana
Pejy fandraisana » Fampahavian'i Sri Lanka » Sri Lanka » Asia » Eran-tany / Faritra » Tempolin'ny Gua Aluvihara (Aluviharaya). Matale
Aluhivara. Tempolin'ny Cave Aluvihara
27 Desambra, 2019
Ny fijerena ny tempolin'i gua Aluvihara
Tantara fohy momba ny tempoly
Inona koa no hojerena ao Aluvihar
Ny vidin'ny fitsidihana ny tempoly
Aluvihara ao amin'ny sari-tany
Ny fijerena ny tempolin'i gua Aluvihara. Tempolin'ny Cave Aluvihara
Raha miala amin'ny Kandy mankany Dambulla (34km avy any Kandy, 3,5km avy any Motala ianao), avy eo dia ahitanao ny sarivongan'i Buddha lehibe eo an-tendrombohitra:
Betsaka no nahita azy, saingy tsy fantatry ny maro fa eo ambanin'ny iray amin'ireo tempoly lava-bato mahaliana indrindra any Sri Lanka! Antsoina Izy Aluvihara - Aluviharaya.
Ny anarana Aluvihara no mandika hoe monasitera amin'ny lavenona. Amin'ny fototra lehibe indrindra io, io tempoly io dia iray amin'ny toerana ara-kolontsaina manan-danja indrindra ao amin'ny nosy, satria araka ny angano, teto no nanoratana ny kaody voalohany momba ny fitsipika bodista tao Sinhala.
Maneho ny andiana lava-bato lava ao anaty harambato izay avo ambonin ny lohasaha.
Ny fiandohan'ny anarana dia mahaliana. Araka ny angano, ny vato telo, izay misy gua lava ankehitriny dia ny angano efa niasan'ny angano ho potiky ny vilany. Ary ny afo ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo ity dia niteraka ihany koa ny lavenona izay niandohan'ity tempoly ity.
Tantaran'ny Tempolin'i Aluvihara
Ara-tantara, ny tempoly dia manamarina fa tao anatiny, araka ny angano, ny voalohany Fehezin'ny fombafomba bodista (Dharma) tamin'ny taonjato fahatelo A.K. Ity Dharma nahazo ity anarana ity dia ny Tripitaka voalohany tany Sinhala. Hatramin'izao, ny fitsipiny izany no mpitari-dalana manan-danja indrindra ho an'ny Buddhisme Theravada!
Tamin'ny fotoana iray, Aluhiwara dia tempolin'ny lava-bato mavitrika telo ambinifolo, saingy anio dia ny telo amin'izy ireo ihany no azo hanaovana fisavana.
Ny zohy voalohany ao Aluvihar
Ny lava-bato voalohany, izay hidiranao aorian'ny fampidirana fidirana dia ahitana sarivongana lehibe iray ao Buddha, 10 metatra ny halavany, ary sarivongan Buddha hafa kely hafa. Ny hoso-doko am-baravarankely izay mampiseho ny làlana misokatra maro dia marihina ihany koa. Ny rindrina amin'ity lavaka ity dia misy ihany koa ny sarin'ny mpanara-dia an'i Buddha.
Ny zohy faharoa ao Aluvihar
Ny lava-bato faharoa dia mampiavaka ny sary hosodoko miaraka amina drafitra iray tsy misy dikany! Eto, amin'ny alàlan'ny sary sy sary sokitra amin'ity lava-bato ity, dia misy ny hevitry ny hoe inona marina ny afobe sy izay miandry ny mpanota.
Sary sokitra amin'ny lava-bato faharoa an'i Aluvihara
Ny sehatra fanasaziana mahatsikaiky eny amin'ny rindrina dia mampiseho ny fahakingan-dahatsoratra mahavariana amin'ny demonia amin'ny resaka fomba hiatrehana ireo izay tsy nandeha tamin'ny lalana marina tamin'ny fiainana.
Ny angon-drakitra sary, na dia eo aza ny "style cartoon" dia mitondra fahatsapana maharary tokoa. Rehefa avy mitsidika ity gua ity ianao dia hieritreritra im-polo alohan'ny hanaovanao zavatra tsy marina.
Matetika mitondra ny zanany any amin’ity lava-bato ity ny mponina any an-toerana, ka hanambara izay tsara sy ratsy.
Ny fitsidihana izay misy ny mpianatra any an-tsekoly dia mitarika ihany koa, amin'ny maha-fanabeazana azy amin'ny ho avy Sri Lankans ny fahatakarana izay manaraka ny fiainana tsy marina.
Fitazana fahatelo any Aluvihar
Ny lava-bato fahatelo dia ny fonenan'ny moanina Indiana nianatra - Buddaghoshi. Raha ny filazan'ny angano, dia izy izay nipetraka tany nandritra ny taona maro (3 taona), niasa tao amin'ny Tripitaka mitovy.
"Tripitaka" amin'ny ravina palmie
Ny rindrin'ny zohy dia voaravaka sary avy amin'ny fiainany ary miasa ao anatin'ity lava-bato ity.
Zava-dehibe ny nanamboarana ireo naoty masina teo amin'ny ravin-palma, izay tamin'izany andro izany no tokony hatao fa tsy taratasy.
Mialà io lava-bato io, azonao atao ny manakatra ny tohatra mankany an-tampony, izay misy tsangambato Buddha iray lehibe ary stupa (dagoba), izay nampiasaina tamin'ny fotoana hitahirizana ireo rely.
Manome fomba fijery mahafinaritra ao an-dohasaha izy io.
Hijery ny lohasaha avy any ambony amin'ny Aluvihara
Tranom-boky ao Aluvihar
Ny mpitondra fivavahana iray dia hanao fanamarihana fahatsiarovana ho anao eo amin'ny ravin-palma mampiasa teknolojia izay efa ho 25 taona
Ny tranokala dia misy tranomboky izay ahafahanao mahafantatra ny teknolojia fanoratana lahatsoratra amin'ny ravin'ny hazo oliva. Eo koa izy ireo, afaka mandoa 100 rupee, handoa souvenir ho anao! Izy ireo dia afaka mampiasa ny teknolojia izay efa roa taona sy tapany taona no manoratra eo amin'ny ravina ny anaranao sy ny datin'ny fitsidihana. Ary omenao ho famenonetana izany.
Tranombakoka any Aluvihar
Misy koa tranom-bakoka kely, fitsidihana izay tafiditra ao amin'ny vidin'ny tapakila ihany koa. Ny fampirantiana ny tranombakoka dia mampiseho mazava tsara ny tantara feno ny “habibiana” nataon'ny fahavalon'ny vahoaka Senegaly.
Vidiny ao amin'ny tempolin'i gua Aluvihara (2019)
Ny fitsidihana ny tempoly dia mendrika 250 rupees
Fanoratana fahatsiarovana miaraka amin'ny anaranao amin'ny ravin-drofia - 100 rupees
Ao amin'ny tempoly na aiza na aiza dia misy fitoeran-javatra manangona fanomezana (Manomeza)
Fampahalalana mifandray. Ampianaro ny sarintany amin'ny fanamoriana.
Aluvihara dia faritanin'i Matale, faritany afovoan'i Sri Lanka.
3,5 km avaratra avaratra no misy azy Matale, 35 avy any Kandy ary 150 km avaratra atsinanan'i Colombo. Ny tanàna dia eo amin'ny lalambe Kandy jaffna.
Misokatra ny tempoly hanaovana fitsidihana mandritra ny famantaranandro.
Noho ny antony somary mahasarika kely ny Aluvihara, dia tsy mbola misy mpitsidika maro eto akory. Noho izany, iray amin'ireo trano izay ahafahanao mahita ny fahanginana sy ny fiadanana ao amin'ny tena tempoly.
Address: Matale, Aluvihara. Aluvihara Junction, Matale Rd, Matale 21000, Sri Lanka
telefaonina: + 94 662 222 533
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana -https: //goo.gl/maps/JHYe8kSwux5uxCQ5A
Tempolin'ny Gua Aluvihara amin'ny sarintany
Ny fijerin'ny Tempolin'i Aluvihara
Hevitra ho an'ny Tempolin'i Aluvihara (Google reviews)
Ny fijerin'ny Tempolin'i Aluvihara (Tripadvisor)
Tena tsara tarehy Tempoly!
Salanisan'ny salanisa 4.3 / 5. Isan'ny isa: 6